Shiinaha CT godka arkay (multipurpose) Soo-saare iyo Badeecad | Guanghua
Depth Goynta qoto dheer: max 60mm (2-3 / 8 ″)
Cabbirka: 19mm (3/4 ″) ilaa 152mm (6 ″)
Te Ilkaha Taagan Carbide: 2-3TPI
Teeth Ilkaha carbide u adkaysta cimriga dheer.
Form Foomka Ilkaha Gaarka ah ee goynta dhakhsaha badan
Goynta alwaax, MDF, Caag, ahama, Tile jilicsan, Dhagax jilicsan, leben. Gaar ahaan qoryaha adag
Card Kaarka midabka
Tag Hager tag
Box Sanduuqa caaga ah, tusaale: sanduuqa caaryada la isku duro, sanduuqa caaryada afuuf
Raridda iyo lacag-bixinta:
Time Waqtiga hogaaminta: 60 maalmood
Bixinta: Advance TT
● Mashiinka Mashiinka Mashiinka xawaaraha sare, Mitsubishi mashiinka dunta gaabiska ah, Swiss Charmilles mashiinka dhalaalaya, MAZAK CNC leexashada, Mashiinka goynta laser-ka Awoodda leh Mashiinka CNC wuxuu ka badan yahay 200 nooc. Vacuum foornada lagu daaweeyo kuleylka, Suunka Net cusbada cusbada kulul.
Qalabka lagu tijaabinayo Shaybaarka
Analy Falanqeeyaha alaabada birta ah, Falanqaynta Jirka & kiimikada, Falanqaynta metallographic, borojektar, qolka heerkulka, baaritaanka buufin ee cusbada, qalabka sameeyaha microscope ect.
Tijaabooyinku ma aha oo kaliya alaabooyinka cusub ee soo koraya, sidoo kale isbarbardhigga tijaabada ee noocyada caanka ah si horumar looga sameeyo kuweenna.
● Waxaan ku guuleysanay Abaalmarinta Naqshadeynta Alaabta “HADDII”.
● Waxaan ku guuleysanay abaalmarinta “Naqshadeynta Baakadaha Jarmalka”.
Hore: Daloolida biraha biraha
Xiga: Daloolka TCT
Dalooliyaha daloolka (xaashida birta ah)
Daloolka TCT waxaa lagu arkay alwaax musbaar leh